कथा – Deepshree Online
Home > साहित्य > कथा
-विनीत ठाकुर गा.वि.स.भवनमा बिहानैदेखि पञ्चहरू भेला भएका थिए । धानोको विषयमा छलफल चल्दै थियो । धानोलाई के गर्ने ? गाउँ निकाला गर्ने कि नगर्ने ? एउटै स्वरमा सबैजना होमा हो मिलाउँदै भन्दै थिए, “धानो यो गाउँकी सबैभन्दा ठुली बोक्सी हो । धानोलाई गाउँमा राखियो भने यसले अरू महिलाहरूलाई पनि बोक्सीको जादु-टुना
- बैद्यनाथ ठाकुर लगातार सातौंपटक नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको परीक्षा फेल भएपछि डा. रितिककी आमाले श्रीमान्लाई भनिन्- 'मैले पहिले नै भनेको थिएँ । बाबुको पढाइलेखाइ निकै कम्जोर छ भन्दा मान्नुभएन । एसएलसी परीक्षामा हजुरले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर उत्कृष्ट श्रेणीमा पास गराउनुभयो । फेरि आईएस्सी भारतबाट पैसाको बलले अठहत्तर प्रतिशत अङ्क ल्याएको
-खेमराज पोखरेल ऊसँग अचम्मले भेट भयो काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ! उस्तै रहेछ यो सन्तु ! चरिचुच्चे नाक, भाटे शरीर, खोपिल्टे आँखा, हाँस्दा बत्तिसै दन्त देखाएर उन्मुक्त हाँस्ने । ‘अरे सन्तु तिमी ? ’ मैले लगभग उसलाई कोट्याएँ । धैर्य गर्न सकिनँ । उसले के सोच्यो कुन्नि, मैले ‘हग’ गर्ने सङ्केत गरेँ ।
पोइला भगाउने इच्छा
- ध्रुवकुमार सापकोटा म आफूलाई निकै भाग्यशाली ठान्छु । जिन्दगीमा चाहना गरेको जति झन्डै झन्डै सबै नै पुग्या छ । धेरै कुराको अनुभव गरियो । कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्थेँ, 'अर्काकी स्वास्नी भगाउनुको मजा कस्तो होला ? त्यो पनि एक पटक अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो ...।' म धेरै फुर्सदी मानिस, दिनभरि फेसबुक चलाएर